Khudbadii Madaxweynaha Somaliland ka jeediyay xaflad jaaliyadda UK u samaysay weftigiisii | FooreNews
Home wararka Khudbadii Madaxweynaha Somaliland ka jeediyay xaflad jaaliyadda UK u samaysay weftigiisii
Khudbadii Madaxweynaha Somaliland ka jeediyay xaflad jaaliyadda UK u samaysay weftigiisii
fooreFeb 27, 2012wararka0
London (Foore)- Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa sheegay inuu hubo haddii midnimadaa iyo dareenka wada-jirka ah ee ay bulshada, xisbiyada iyo dawladda Somaliland wada qaateen lagu sii wado dhakhso loogu guulaysan doono rabitaanka iyo qaddiyadda Jamhuuriyadda Somaliland ee aqoonsiga.
Madaxweynaha Somaliland waxa uu sheegay inay fadhi gaara la yeesheen Baarlamanka dawladda Ingiriiska, isla markaana dhagaysteen su’aalo Ra’iisal wasaaraha Ingiriiska Mr. David Cameron ay mustaqbalka Somaliland ka weydiiyeen Xildhibaanno ka tirsan Baarlamanka dalkiisa oo Somaliland saaxiib la ah. Madaxweyne Axmed-Siilaanyo waxa uu sidaa ku sheegay Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay xalay isaga iyo Weftigiisu kula kulmeen Jaaliyadda reer Somalilnad ee ku dhaqan Carriga Ingiriiska. Taasoo uu gebo-gababii hadal kooban ka jeediyey.
Madaxweyaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), waxa uu ka warramay go’aankii laga midaysnaa ee lagu tagay shirka London siduu ku yimi iyo guusha uu u soo hooyey Somaliland, “Runta markaynu ku wadahadalno arrinta ka qaybgalka Shirka dood badan baa laga wada galay, su’aalo badan baa la is-weydiiyey, oo loo dhammaa Golayaasha dawladda, Golayaasha Baarlamanka, Asxaabta siyaasadda, Ururrada cusub, ururrada bulshada iyo shacabkaba. Taladaa waxa ka soo baxay go’aan ah in loo arkay in ka qaybgalka shirka London dani ugu jirto Somaliland.” Sidaa ayuu yidhi Madaxweyne Siilaanyo.
Madaxweynaha Somaliland oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi; “Markaannu halkan nimi arrintaasi waxay noqotay arrin Illaahay innagu guuleeyey, illaa haddana aynu Illaahay ugu mahadnaqayno halkaynu arrintaa ka qaybgalka Shirka London ka gaadhnay. Muddaharaadkii la isugu soo baxay ee dadkeenna dibadaha isaga yimi ku muujinayeen dareenka ay ka qabaan iyo taageerada ay u hayaan dawladdooda iyo madax-bannaanidooda qiimo weyn bay lahayd..”
Md. Axmed-Siilaanyo, waxa uu sheegay inay shirka ku qaybiyeen waraaqo qoraal ah oo lagu soo koobay ajandayaasha qorshaha mustaqbal iyo waxyaabaha ay Somaliland qabsatay, Madaxweynaha oo arrintaa sharraxaad ka bixinayaana waxa uu yidhi;“Waraaqihii aannu u diyaar-garaynay ee ka warramayey dalkeenna, horumarka uu gaadhay iyo waxa u qorshaysan, waxa lagu qaybinayey madashii shirka, waraaqihii aad baa loo wada qaatay, cid kasta oo dunida ka timi oo shirka joogtay way qaateen oo aad baa loo xiisaynayey oo dalkeenna xiiso badan bay u qabeen. Markaa, waxaannu dedaalka aad samaysayseen haddaynu reer Somaliland nahay, ee hadday bannaan-bax tahay, hadday shirarka tahay, hadday waraaqaha aynu qaybinaynay tahay dedaal baynu samaynay.”
Madaxweynaha Somaliland Axmed-Siilaanyo mar uu ka hadlay fadhi ay la yeesheen Baarlamanka Ingiriiska, waxa uu yidhi; “Barlamaanka Ingiriika waannu tagnay oo waannu fadhiisannay, waa lagu soo qaaday oo su’aalo ayaa lagu weydiiyey Ra’iisal wasaaraha Ingiriiska oo ay Xildhibaannada aynu Saaxiibka nahay ee Baarlamanka Ingiriiska ku jiray ka weydiiyeen, waanannu dhagaysanaynay oo waannu fadhinay. Markaa, walaallayaal dagaal badan baynu wada galnay, dagaalka aynu galnay waa mid danta iyo maslaxadda reer Somaliland ay ku jirto.”
“Waxay nala tahay oo aan hubaa oo ku kalsoonahay boqolkiiba boqol haddii aynu kalsoonidaa, wada-jirkaa iyo midnimadaa dibed iyo gudo leh, goloyaal leh, Baarlamaan leh, Axsaab leh aynu ku wadno qaddiyaddeenna inaynu ku guulaysan doonno, Illaahayna waynu la kaashanaynaa. Illaahay-na waxaynu ka baryaynaa inuu si dhakhso leh innoo guuleeyo, meel fiicanna waynu maraynaa..” sidaa ayuu yidhi Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo).
Sidoo kale, waxa halkaasi ka hadlay Wasiirradda arrimaha dibadda, warfaafinta, qorshaynta, Gaashaan-dhiga iyo Wasiirul dawlaha arrimaha dibadda kuwaasi oo dhammaantood ka waramay ahmiyadda shirkii London u lahaa Somaliland.
Waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay Guddoomiyeyaasha sadexda xisbi qaran iyo xildhibaano ka tirsan Goleyaasha Baarlamaanka ee Guurtida iyo wakiiladda.
Previous PostShir lagaga hadlayay horumarinta Ganacsiga gaarka ah oo lagu qabtay Hargeysa Next PostUrurka ay ku bahoobeen Hilibleyaasha Hargeysa oo ka hadlay Adeegyadda ay bulshadda u hayaan